AbakwaBMW bazama ukuvusa iGusheshe
AKUNGABAZEKI ukuthi iBMW 325is edume ngeleGusheshe, yimoto enomlando futhi eyintandokazi eNingizimu Afrika.
Ngesikhathi yethulwa ngo-1990, i-325is enezicabha ezimbili yayiyinto ehlukile kuleli futhi kwakhiqizwa eziwu-508 kuphela. Yayitholakala ngezinhlobo ezimbili okuyi-2.7 litre straight six engine enamandla angu-155kW (ayebabazeka ngaleso sikhathi).
IBMW ivusa umlando ngokwethula ebizwa nge-330is Edition. Ngokombhalo okwi-website yakwaBMW, lolu hlobo lwemoto luzoqala kuleli maduze futhi abathengi kumele babhalise khona ukuze bathole imininingwane ngayo uma isikhona.
Okwamanje ayiikho imininingwane edaluliwe kodwa kulindeleke ukuthi ifane ne-330i eyakhonjiswa kwiM Festival ngonyaka odlule. Yayinamarimu angu-20 inch, umbala omnyama kwigrille, okubhampa ngaphambili nakwispoiler ebhuthini ngemuva.
Mancane amathuba okuthi ithole amandla angaphezu kwe-330i enenjini engu-2 litre turbopetrol efuqa 190kW no-400Nm kodwa okungenani kumele ibe nesuspension esporty nezinye izinto ezizoyenza yehluke.
Leli phephandaba lizokubikela ngale moto uma eminye imininingwane ngayo isivelile. IGusheshe yazakhela udumo kuleli ikakhulukazi emalokishini.
Yagqama kakhulu emdlalweni wethelevishini Ubambo Lwami ihamba uMazwi owayelingiswa nguMenzi Ngubane. Nanamhlanje iseyintandokazi kulabo abathanda umdlalo wokushaya izidudla abachazwa ukuthi idonsa ngamasondo angemuva.